प्रभु बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनीको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर प्रभु बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनीको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण
मुख्य खबर, लगानी 267 views
प्रभु बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनीको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण
बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आव २०७४/७५ को दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार रू. ६३ करोड ४९ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ४२ प्रतिशतले कमी हो । बैङ्कले अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. १ अर्ब ११ करोड नाफा कमाएको थियो । बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा घटेकाले नाफा घटेको हो । पुस मसान्तसम्ममा बैङ्कको पूँजी ११ प्रतिशतले बढेर रू. ६ अर्ब ५३ करोड ३४ लाख पुगेको छ । बैङ्कले रिजर्भ कोषमा रू. ३ अर्ब १० करोड छुट्याएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा १ सय २० प्रतिशतले बढी हो । वैदेशिक मुद्रा विनिमयबाट रू. १ अर्ब ४५ करोड आम्दानी गरेको छ । साथै बैङ्कले पूँजी वृद्धिका लागि १० बराबर ४ अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गरिसकेको छ । यो हकप्रद शेयर निष्कासनपछि बैङ्कको पूँजी रू. ८ अर्ब पुग्नेछ । बैङ्कले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. २४ करोड ५० लाख छुट्याएको छ ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. २२०
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. ४९७
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्यः रू. १९६
१८० दिनको औसत व्यापार मूल्यः रू. २७५.३६
अध्यक्षः देबी प्रकाश भट्टचन
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः असोक शेरचन
प्रधान कार्यालयः बबरमहल, काठमाडौं
स्टक सङ्केतः पीआरभियु
बैङ्कको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दाः
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा १८ दशमलव ९१ प्रतिशतबाट घटेर ९ दशमलव ७२ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । बैङ्कको लगानी रू. ९ अर्ब ४७ करोड रहेको छ ।
बैङ्कले पुस मसान्तसम्ममा रू. ८६ अर्ब १२ करोड निक्षेप सङ्कलन गरी रू. ७१ अर्ब ७६ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी रू. १ अर्ब २० करोड, कर्मचारी खर्च रू. ४७ करोड ७० लाख, अन्य सञ्चालन खर्च रू. ३५ करोड ५१ लाख र सञ्चालन नाफा रू. ५९ करोड ५५ लाख रहेको छ ।
स्थिर सम्पत्ती न्यून प्रतिशतले बढेर रू. २ अर्ब १३ करोड ५ लाख र अन्य सम्पत्ती ७९ प्रतिशतले बढेर रू. ५ अर्ब ५५ करोड ३४ लाख पुगेको छ । बैङ्कले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. २४ करोड ५० लाख छुट्याएको छ भने निष्क्रिय कर्जा ४ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ ।
पूँजी कोष पर्याप्तता ११ दशमलव २४ प्रतिशत, सिडी रेशियो ७५ दशमलव २४ प्रतिशत र आधार ब्याजदर ९ दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ ।
बैङ्कको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. २१ दशमलव ५९ मूल्य आम्दानी अनुपात ११ दशमलव ५८, तरलता अनुपात २२ दशमलव ५३ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ६३ दशमलव ९२ रहेको छ । बिहीवारको मूल्य प्रतिशेयर नेटवर्थको साढे १ छ ।
खरीद चापः बैङ्कको बिहीवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप साढे १ गुणा बढी छ । सो अवधिसम्म १४ हजार ४ सय ५१ कित्ता शेयर खरीद र ९ हजार ९ सय ३० कित्ता विक्री गर्ने माग थियो ।
बिहीवार भएको शेयर कारोबार विवरणः
१४ जनवरी २०१८ १२ अप्रिल २०१८
मैनबत्ती विश्लेषणः बैङ्ककोे ५७ दिनको कारोबार अवधिमा अन्तिम दिनमा सेतो मारोबोजु आकृती बनेको छ । यस आकृतीले बैङ्कको शेयर मूल्य आगामी दिनमा बढ्ने सङ्केत देखाउँछ ।
आरएसआईः बैङ्कको ५७ दिनको कारोबारमा आरएसआई ओभरसोल्ड जोन (५३ दशमलव ०६ स्केल)मा छ । यसले खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनः कम्पनीको ५७ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन २ दशमलव ४० विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको छ ।
मुभिङ एभरेजः बैङ्कको ५७ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग नजिकिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने औसत मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्यरेखाभन्दामाथि छ । हालको मूल्य रू. २ सय २० देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भइ मूल्य महङ्गिएमा रू. २ सय २४ मा प्रतिरोध र सस्तिएमा रू. २ सय १७ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।